China HDPE igesi ipayipi ifektri abakhiqizi | UShengyang
Ipayipi legesi le-HDPE liqinile futhi liphephile, lisetshenziswa kakhulu kubunjiniyela begesi basemadolobheni.
Life Impilo ende
Ukusetshenziswa okuphephile iminyaka engaphezu kwengu-50.
Lex Ukuvumelana nezimo
Ipayipi le-PE linokunwebeka ngesikhathi sekhefu elingaphezulu kuka-500%. Ngeke idabuke ngaphansi kwezinguquko ezahlukahlukene ezingaphansi komhlaba ezifana nokuncipha komhlaba nokuzamazama komhlaba, futhi inokuphepha okuphezulu. Indawo yokugoba (R≥15D), asikho isidingo samalunga endololwana, esivumelana nokwakhiwa.
Resistance ukumelana Cold
Umugqa wokunwebeka komugqa wepayipi le-PE ngu-1.5X10-4mm / mm ° C, futhi ubude bawo cishe abuphazamiseki ekushintsheni kwezinga lokushisa. Alukho ushintsho lomzimba olwenzeka ngisho naku- -80 ° C. Ifaneleka ikakhulukazi ezindaweni ezibandayo kakhulu.
Ipayipi le-PE lingasetshenziselwa ukuxhuma ngogesi noma ukuxhumana okushisayo. Ukuxhumeka kwayo kuphelele, kuqinile futhi akusoze kwavuza.
◎ Corrosion ukumelana
Gxila ku-hydrochloric acid ekamelweni lokushisa. Ku-sulfuric acid (≤70%), i-nitric acid (≤25%), i-phosphoric acid, i-hydrofluoric acid, i-acid eyinkimbinkimbi (≤10%) nezinye izixazululo, amapayipi e-PE awathinteki.
◎ usawoti we-alkali kanye nezinto ezingaphili
Ipayipi le-PE licwiliswe ku-lye ohlukahlukene, usawoti wezinto ezingaphili kanye namanzi olwandle ku-60 ℃, ipayipi le-PE ngeke lonakalise.
Matter Izinto eziphilayo
Ipayipi le-PE lingamelana ne-solvents ephilayo efana ne-hydrogen peroxide ne-methyl petroli emazingeni okushisa ajwayelekile, futhi ipayipi le-PE ngeke lonakalise.
Ipayipi le-PE isisindo esincane (i-1/7 kuphela yensimbi yensimbi) futhi inokuguquguquka okuhle. Ipayipi le-De16-De75 lingalimala ngokuhamba okulula nokwakhiwa.
Olandelayo: Ipayipi lensimbi elenziwe ngopende elenziwe ngamapayipi elihlinzekwa ngamanzi
Hdpe Electro Fusion negesi Onengqondo Pe Pipe Onengqondo
Hdpe negesi Pipe Hdpe tubing
I-Hdpe Pipe Yokuphakelwa Kwegesi
Amapayipi we-Hdpe Wegesi
Ukushisa ukumelana polyethylene ipayipi esiyinhlanganisela nge ...
Ijazi lekhebula lamandla e-CPVC
ipayipi lensimbi elinamandla elibunjiwe lensimbi
I-HDPE iphume ipayipi lamanzi elithule kakhulu